Uginindela Okokuqala udini tableware imishini womshini eChina
Ngo-1992, i-Far East yasungulwa njengenkampani yezobuchwepheshe egxile ekwakhiweni nasekwakhiweni kwemishini ye-fiber fiber ebunjiwe yethebula. Emashumini eminyaka adlule, i-Far East ibambisene kakhulu nezikhungo zocwaningo lwesayensi kanye namanyuvesi ekwenzeni ubuchwepheshe obusha nokuthuthuka okuqhubekayo. ...
I-Far East New Robot Arm Technology ikhulisa kakhulu amandla wokukhiqiza
I-Far East ne-Geotegrity igxile kubuchwepheshe be-R & D kanye nokwenziwa kwezinto ezintsha, ngokuqhubekayo kuthuthukiswa izinqubo zokukhiqiza, ukwethula ubuchwepheshe obusha bokukhiqiza, nokwandisa amandla wokukhiqiza wemishini yokubumba uginindela. Far East fibre uginindela olubunjiwe imishini ye-tableware ingaveza i-v ...
I-Far East Ihambela Umbukiso we-PROPACK China & FOODPACK China eShanghai
I-QUANZHOU FAREAST IMVELO YOKUVIKELWA KWEZIMVO CO.LTD Ihambele Umbukiso we-PROPACK China & FOODPACK China eShanghai New International Exhibition Center (2020.11.25-2020.11.27). Njengoba cishe umhlaba wonke unenqwaba yokuvinjelwa kwepulasitiki, iChina nayo izovimbela amapulasitiki alahlwayo etafuleni igxathu negxathu. S ...
12 Imisa Umtfumbu Molding Tableware Izinsiza kusebenza Zithunyelwe eNdiya ngoNovemba 2020
Ngomhla ka-15 Novemba 2020, amasethi ayi-12 asetha imishini yokuPakisha yokudla ebunjiwe ye-Energy-Semi-othomathikhi abepakishwa alayishwa ukuthunyelwa eNdiya; Iziqukathi ezi-5 ezigcwele imishini eyinhloko ye-12sets pulp molding, amasethi ayi-12 wesikhunta sokukhiqiza esenzelwe imakethe yaseNdiya namasethi ayi-12 h ...